Ciyaaraha – Page 10 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
eal Madrid Oo Lagu Soo Waramayo Inay Heshiis Qarsooni Ah La Meeldhigtay Gooldhaliye Robert Lewandowski
June 1, 2016	Leave a comment 41 Views
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa ah saxiixa Galactico-ha ee ay doorbideyso Real Madrid marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub xagaagaan, sida ay ku warameyso majaladda AS. Kooxda dhowaan loo caleemo saaray boqoradda Yurub ama ku guuleysatay UEFA Champions League ayaa dhowr bil lala xiriirinaayey saxiixa mashiinka goolasha ee kooxda Bayern Munich. Ilo ku sugan Germany ayaa soo ...
Milkiilaha Inter Milan oo ka hadlay dhaqaale xumida haysata Kooxdiisa
May 31, 2016	Leave a comment 49 Views
Milkiilaha Kooxda Inter Milan Erick Thohir ayaa ka hadlay xaalada Kooxdiisa ka dib markii ay ku dhamaysatay kaalinta 4-aad ee kala saraynta Horyaalka Italian Serie A. Milkiilaha ugu badan saamiga Kooxda Nerazzurri Erick Thohir ayaa sheegay in Kooxdiisa ay ku qasbanaan doonto iibinta labo ilaa iyo sedex Ciyaariyahan oo ka tirsan Kooxda, ka dib dhaqaalo dari so wajahday Kooxda ...
Kooxda Real Madrid oo qaaday koobka kooxaha Yurub
May 29, 2016	Leave a comment 42 Views
Kooxda Real Madrid ayaa ku guulaysatay koobka kooxaha Yurub. Ciyaartii kamadambayska ahayd ayay dheeleen kooxda Athletico Madrid. Ciyaartan ayaa ka dhacaysay garoonka Milan ee dalka talyaaniga. Gool iyo gool ayay ku dhamaaday xiligii caadiga ahaa ee 120-ka daqiiqo. Ka dibna waxaa lagu kala baxay gool kulaad ay ku badisay Real Madrid.
Daawo Sawirrada:Falanqeynta kulanka Finalka Atletico Madrid iyo Real Madrid ee Champion League
Ciyaarta finalka koobka Champion League ama horyaalka Yurub ayaa caawa waxa fooda is dari doona kooxaha Real Madrid iyo Atletico di Madrid iyadoo dagaalkaasna ka dhici doono magaalada Milano ee xarun ganacsiyeedka jasiirada u ekaha talyaaniga, marka ay goor sheegta geeska afrika garguuraneyso 9:45 daqiiqo ee fiidnimo iyadoo lagu kala bixi doona koobka dhagaha weyn ee Champions league oo ay ...
Nin u dhashay dalka Thailand ayaa kasoo kabanaya dhaawac qaniinyo ah
May 27, 2016	Leave a comment 30 Views
Nin u dhashay dalka Thailand ayaa kasoo kabanaya dhaawac qaniinyo ah oo u xubintiisa taranka ka gaarsiiyey mas xilli uu dul fadhiyey godka saxarada ee Musqusha ama suuliga. Maskan oo cabirkiisu lagu sheegay 3 mitir ayaa waxa uu kasoo baxay godka saxarada kadibna waxa uu toos u abaaray xubinta taranka Attaporn Boonmakchuay oo uu ka qaniinay. Mr. Boonmakchuay oo la ...
Jose Mouriinho oo maanta loo magacaabyo tababaraha Manchester United
May 27, 2016	Leave a comment 32 Views
Macalinka guulaha u saaxibka ah ee dalka Portugal Jose Mourinho ayaa lagu wadaa maanta si rasmi ah loogu magacaabo tababaraha cusub ee kooxda Manchester United ee dalka Ingiriiska. Wadahadalo muddo saddex maalin ah u socday wakiilka Mournho ninka lagu magacaabo Jorge Mendes iyo saraakiil sare oo ka tirsan Manchester ayaa ugu danbeyntii waxaa kasoo baxay heshiis uu Mourinho ku ogolaaday ...
Liverpool oo lasoo wareegtay goolhaaye Loris Karius isla markaana saxiixay heshiis.
May 25, 2016	Leave a comment 31 Views
Kooxda kubada cagta Liverpool ayaa ku guulaysatay saxiixa goolhaaye Loris Karius,kaaso aad loola xiriirinayay. 22-jirkaan ayaa maanta heshiis u saxiixay kooxda Reds ka dib markii uu maray tijaabada caafimaadka. Tababaraha kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa ku faraxsan saxiixa, gaar ahaan wakhtiga la sameeyay. Klopp oo la hadlayay Tvga Liverpool ayaa yiri ” Waan ku faraxsanahay waxaan la soo wareegnay goolhaaye Loris Karius, ...
Nemanja Matic oo badali doono Michael Carrick
jose Mourinho ayaa ka fikiraya in uu la soo wareego xiddiga khadka dhexe ee kooxda chelsea Nemanja Matic, sida ay sheegayaan wararka. Express Sport ayaa ogaatay in tababaraha reer Portugal la siin doonaa £200million si uu dib ugu dhiso kooxda xagaagan. Warar dhawaan soo baxay ayaa sheegay in manchester united dalab gaadhay £19.5m miiska u saari doonto kooxda chelsea oo ...
Rasmi :Liverpool oo ciyaaryhan la soo wareegtay
Liverpool ayaa xaqiijisay in £4.7 million eey ku soo qaadatay laacibka reer German Loris Karius kasoo shan sano hishiis eey ugu soo qadeen kooxda Mainz. 22-sano jirkan ayaa kooxdiisa ka caawiyo kaalinta lixaad ee kala sareenta horyaalka Germalka xili ciyaaredkii la soo dhaafay . Gool hayan ayaa xeran doono numbarka 1-aad ee kooxda Liverpool
Mats Hummels oo si rasmo ugu biiray Bayern Munich
May 24, 2016	Leave a comment 61 Views
Bayern Munich ayaa dhameystirtay saxiixa Mats Hummels kaas oo ay kala soo wareegeen kooxda ay cadawga yahiin ee Borrusia Dortmund. Kabtankii hore Dortmund ayaa caafimaadka maray maanta isla markaana si rasmi ah qalinka ugu duugay heshiiska uu kaga mid noqonayo kooxda ka dhisan Allianz Arena wuxuuna qalinka ku duugay heshiis shan sanadood ah. Si kastaba 27-jirkaan Jarmalka u dhashay ayaa ...